Kuki na ọnụ ọgụgụ | Nleta Hultsfred
hem » Kuki & Nchịkọta
Kuki & Nchịkọta2022-01-19T10:28:36+01:00
Weebụsaịtị a nwere ihe akpọrọ kuki.
Dabere na Iwu Nkwukọrịta Electronic, nke bidoro na 25 July 2003, a ga-agwa onye ọ bụla na-eleta weebụsaịtị yana kuki na weebụsaịtị nwere kuki, ihe eji kuki ndị a na otu esi zere kuki. Kuki bụ obere faịlụ data nke weebụsaịtị na-echekwa na kọmputa gị ka ha nwee ike ịmata kọmputa gị oge ọzọ ị gara na weebụsaịtị. A na-eji kuki n'ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ iji nye onye ọbịa ohere ịnweta ọrụ dị iche iche. Ihe ọmụma dị na kuki nwere ike iji soro ihe nchọgharị onye ọrụ. Kuki na-ebugharị ma enweghị ike ịgbasa nje virus kọmputa ma ọ bụ sọftụwia ndị ọzọ.
A na-eji kuki eji arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ. ka ewere:
- Ntọala nchekwa maka otu esi gosipụta weebụsaịtị (mkpebi, asụsụ wdg)
Tụgharịa nzipu ozi ezoro ezo nke ozi dị nro na ịntanetị
- mee ka nyocha nke otu ndị ọrụ si webata weebụsaịtị ma si otú a na-achịkọta ihe akaebe maka etu esi ewepụ weebụsaịtị ahụ n'ozuzu
- jikọta ikpughe onye ọrụ na mgbasa ozi na weebụsaịtị ya azụmahịa e - commerce dị ka ntọala maka ịgbakọ ụgwọ ọrụ
weebụsaịtị na netwọk mgbasa
- nakọta ozi gbasara omume ndị ọrụ iji gbanwee ma belata ọdịnaya na mgbasa ozi nke weebụsaịtị ndị gara na omume ndị a.
Weebụsaịtị a na-eji kuki iji tụọ okporo ụzọ yana site na enyemaka nke ọrụ ntanetị "Google Analytics" nke na-eji kuki, a na-anakọta ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na weebụsaịtị. A na - eji ozi a eme ihe iji meziwanye ọdịnaya weebụsaịtị na ahụmịhe onye ọrụ. A na-ejikwa kuki iji mee ka onye ọrụ nweta ọrụ ahụ icheta nhọrọ nke mba / asụsụ ruo oge ọzọ onye ọbịa ga-eleta otu ihe nchọgharị ahụ. A na-ejikwa kuki iji cheta nhazi ọdịdị ọ bụla.
Kuki na teknụzụ ndị ọzọ echekwara ma ọ bụ weghachite data sitere na kọmputa onye ọrụ nwere ike iji ya mee ihe na nkwenye onye ọrụ. Enwere ike inye nkwenye n'ụzọ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ site na ihe nchọgharị ahụ. Na ntọala ihe nchọgharị, onye ọrụ nwere ike ịtọ nke kuki a ga-ahapụ, gbochie ma ọ bụ ehichapụ. Gụkwuo banyere otu esi eme nke a na ngalaba enyemaka ihe nchọgharị yana maka ozi ndị ọzọ http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/.
Mara na weebụsaịtị a na-eji kuki naanị iji mee ka ọ dị mfe maka onye ọrụ yana iji rụọ ọrụ zuru oke.